10 I-Scenic villages eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 I-Scenic villages eYurophu
Umhlaba omkhulu weYurophu yimvelaphi yamabali amaninzi kunye neentsomi, ekumeni emangalisa, kunye nemizana egcina iimfihlo zakudala. Kufutshane nezixeko eziphakathi nendawo okanye zigxunyekwe emva kweentaba zelitye, Inani leelali ezintle nezinomdla eYurophu azinasiphelo. kodwa, nazi 10 iilali ezintle zaseYurophu ubuhle bazo nobugqi bugqitha kubo bonke abanye.
izithuthi kaloliwe yeyona ndlela indalo ahambe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, the Amatikiti amaThengi angabizi kakhulu kwiWebhusayithi.
1. Jonga, Swizalend
Eyona dolophana intle eSwitzerland, I-Guarda lali incinci, phakathi kwamadlelo aluhlaza. Ngaphezulu kwenxalenye esezantsi yentlambo ye-Engadin, okanye njengoko abantu bendawo beyibiza njalo, I-Engiadina ilawula imbonakalo ye-epic yaseSwitzerland. Yakhelwe kwisiza selanga, 300 iimitha ngaphezulu kwethafa, ukugada konke ukuza nokuza, kunye nezithethe zakudala njengokugxotha ubusika.
Amakhaya amhlophe ahlotshiswe ngepeyinti yesiko kwaye Imibhalo yakudala ebizwa ngokuba sgraffiti. KwabaseRoma, ulwimi lwasekhaya, usindile kwaye usathetha nanamhlanje.
I-Basel ukuya eChur ngoLoliwe
UBern ukuya eChur ngoLoliwe
UTurin ukuya kuTirano ngoLoliwe
Bergamo ukuya kuTirano ngoLoliwe
2. I-Scenic villages eYurophu: Cochem, Jemani
Ilali elala elunxwemeni lomlambo iMoselle. Izindlu ezinamahafu ezinemigca emide kunye nezindlu ezihonjisiweyo ezinomgaqo omxinwa. Intle ekwindla, xa imifuno eluhlaza kunye nemithi zinxiba iimpahla zazo zegolide, ukongeza kumzobo kunye nokuseta okuhle koCochem entle.
Singqongwe zizidiliya kwaye iinduli, Ilali yeCochem yikhadi leposi-igqibelele. Eyona ndlela yokufumana ilali kunye nokufumana zonke iindawo ezintle zelali ngebhayisekile.
IFrankfurt ukuya eCochem ngoLoliwe
Bonn ukuba Cochem ngoLoliwe
I-Cologne kwi-Cochem ngoLoliwe
Stuttgart ukuya Cochem ngoLoliwe
3. Dinant, Bheljiyam
Phakathi kweengxondorha ezibalekayo, elunxwemeni lomlambo iMuseuse, kuhlala ilali entle yeDinant kwingingqi yeWallonia. Imozulu enkudlwana, ebusika, okanye isipringi, le lali incinci ijongeka imangalisa ngokwenene kuyo nayiphi na imozulu kunye nexesha lemini. Ezona zimnandi zizezothando zivela kwithambeka eliphezulu.
Idome yeCollegiale Notre-Dame De Dinant yinto ephambili ngasemva kweentaba zelitye elimnyama. Izindlu ezinemibala kunye neenqanawa ngaphambili, Gqibezela imbonakalo ebonakalayo.
Ukuba unexesha elongezelelweyo, tyelela iNqaba ekufutshane yeCrevecoeur, Izitiya zeAnnevoie, kunye neeCaveau de Veves zokujonga ezinye iiposikhadi.
Ibrussels ukuya kwisidlo sangokuhlwa ngoLoliwe
I-Antwerp ukuya kwisidlo sangokuhlwa ngoLoliwe
Ghent to isidlo ngololiwe
Ubuxoki ngokutya isidlo ngoLoliwe
4. I-Scenic villages eYurophu: UNorcia, ElamaTaliyane
Emva kodonga olukhuselayo, phakathi kweenduli eziluhlaza, e-Umbria eseMpuma, uya kufumanisa ilali entle yeNorcia. Le lali incinci yexesha eliphakathi inomtsalane kwaye ijongeka imangalisa ngokupheleleyo ngexesha lentwasahlobo xa iindawo ezijikelezileyo ziqhakaza ziithayile ezimibalabala.
Iicawa, Ubukhosi base-Italiya, yongeza kwiimbonakalo eziguqulayo zeNorcia. kwakhona, umlambo iNera yenye indawo onokuhlola kuyo kunye ukonwabele ukubonwa okumangalisayo yengingqi entle yase-Umbria e-Itali. Endleleni qiniseka ukuba ujonga ii-truffles ezidumileyo, kwaye unambitha i-cuisine yendawo ye-spaghetti okanye i-frittata ene-truffles. Yinto yobuThixo kwaphela!
UMilan uye eRoma ngololiwe
UFlorence ukuya eRoma ngololiwe
Pisa ukuya eRoma ngololiwe
Naples ukuya eRoma ngololiwe
5. Ukugcwala, Inetherlands
Ukuba uhambela eHolland ukuya kuhlwayela amasimi e-epic tulip, uze undwendwele iLisse entle. Le lali intle kangaka 45 imizuzu kude neAmsterdam.
ILisse mhlawumbi yenye yezona lali zincinci eNetherlands, kodwa ilikhaya 7 izigidi zebhalbhu zeentyatyambo ezityalwa minyaka le kwiGadi zaseKeukenhof. Ukusukela ekupheleni kuka-Matshi ukuya phakathi ku-Meyi, Ezi bulbs ziyaqhakaza zibe zii tulips ezintle nezinemibala. Ngaloo ndlela, Ilize ngokungathandabuzekiyo yeyona intandokazi kunazo zonke entwasahlobo kwaye wena unezinye iitshomi kunye neembono ezingalibalekiyo.
I-Bremen ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
IHannover ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
I-Bielefeld ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
IHamburg ukuya eAmsterdam ngoLoliwe
6. I-Scenic villages eYurophu: st. UGilgen, Ostriya
Wonke umntu uyazi imilingo Hallstatt, kodwa iAustria ilikhaya kwiilali needolophu ezininzi. Enye yezona lali zintle kakhulu eYurophu ikwiAustria. st. Ilali yaseGilgen yayiyeyona khaya kusapho lakwaMozart, kwaye ilali ihlala elunxwemeni lweLake Wolfgang.
Ungahlola ilali ngeenyawo okanye ibhayisekile, okanye isuka kwimoto yentambo. Ukuba awoyiki ukuphakama, emva koko iimbono ezivulekileyo zivela kwi-cable cable ziya kuwususa ngokoqobo umphefumlo wakho. Iimbonakalo ezintle zelali ngokuqinisekileyo zizinto eziphefumlelweyo ezivela kumagcisa aseViennese.
IMunich ukuya kwi-Salzburg ngoLoliwe
IVienna ukuya kwiSalzburg ngoLoliwe
I-Graz ukuya kwi-Salzburg ngoLoliwe
I-Linz ukuya kwi-Salzburg ngoLoliwe
7. st. Iitshisi, Fransi
Ikhaya kwiiFrench Delicacies Foie Gras kunye ne-truffles, ilali encinci yeSt. Imfene yile 2 iiyure ukusuka eBordeaux. Oku kuqinisekisa izidiliya ezithandekayo macala onke, apho unokuyonwabela iglasi ye wayini entle njengoko uthandile ilali entle kunye nasemaphandleni.
st. Ilali yelali inezinto zethu 10 iilali ezintle zaseYurophu zibulela izindlu ezifulelwe ngamatye. Ukwengeza, Icawa yenkulungwane ye-12 kunye nenqaba ye-13th century zilungile embindini welali. Indlela enamajikojiko iya kunqumla ilali kunye nezindlu zayo zamatye anombala omnyama iye kweyona miboniso mihle kunye neendawo.
st. Iijeni zibonisa inganekwane yeFrance isikelelekile ngayo. Ungayonwabela indawo okuyo uhambo lukaloliwe ngaphesheya kweFrance.
I-Nantes ukuya eBordeaux ngoLoliwe
I-Paris ukuya kwi-Bordeaux ngoLoliwe
ILyon ukuya eBordeaux ngoLoliwe
I Marseilles ukuya eBordeaux ngoLoliwe
8. I-Scenic villages eYurophu: Bibury, England
Izindlu zodaka zamatye ezinophahla oluxholwe ngokuqinileyo olunamagqabi aluhlaza ajikeleze into eyenza iBible yiyeyona dolophana intle kakhulu eYurophu. Qiniseka ukuba uye ezantsi eArlington Row, eyona ndlela inomtsalane kunye nezithsaba ezintle.
Ukuhamba uya kukuthatha uye ngqo ebomini be-17 yenkulungwane yeBibury. Eyona dolophana intle eNgilane ihlala kunxweme loMlambo uColn. Le yayiyeyona ndawo ibalaseleyo yokuxhoma uboya kwiihotele zabaluki. Umhlaba weBible ulungele i Ipuzzle yasemva kwemini okanye ngentsasa yokuqala ukuhamba ngaphambi kokuba izihlwele zabakhenkethi ziphazamise ukuthula kwaso kunye nemilambo yokulala.
Amsterdam ukuya eLondon ngoLoliwe
I-Paris ukuya eLondon ngoLoliwe
Berlin ukuya eLondon ngoLoliwe
IBrussels ukuya eLondon ngoLoliwe
9. ILindau yaseJamani
Ilali yaseLindau ikumda we-Austria neJamani, kwiJamani yaseBavaria. Yenye yezona ndawo zintle ze ukuwela iholide eYurophu. Kunxweme lweChibi leConstance, ikwabizwa ngokuba yiBodensee, le lali yipeninsula, Ibhulorho edibanisa phakathi kwelizwe kunye nesiqithi.
Iimbalwa ezimbalwa zeembonakalo ezihle kwilali yitrato iMaximilianstrasse, igumbi lokukhanya kwekhulu elineminyaka eli-13, kunye nedolophu yakudala, Altstadt.
NguLindau igugu elifihliweyo eJamani nakwilali ekufanele ngokupheleleyo ukutyelelwa kuhambo lwakho olulandelayo. Kukho uloliwe wase-Erocity ovela eMunich, Zurich, kunye neStuttgart.
I-Berlin ukuya eLindau ngoLoliwe
UMunich ukuya eLindau ngoLoliwe
Stuttgart ukuya eLindau ngoLoliwe
I-Zurich ukuya eLindau ngoLoliwe
10. I-Scenic villages eYurophu: I-Czech Krumlov, Umphakathi waseCzech
indawo zamagugu UNESCO, Ilali yaseCesky Krumlov eBohemia ngumxube weRenaissance, Gothic, kunye nolwakhiwo lweBaroque. Ukudibana noMlambo iVltava, ICesky Krumlov yenye yeyona milambo intle eYurophu. Imifanekiso yezindlu ezisebhankini enobuntu obuhle basemva ngokuqinisekileyo yenye yezona zimvo zintle eYurophu. Kungenxa yeso sizathu uCesky Krumlov esethu 10 iilali ezintle kwiluhlu lwaseYurophu.
Kunconyelwa kakhulu ukuba unyuke uye kwinqaba yaseCesky Krumlov kwiphaneli yaseCesky Krumlov engalibalekiyo., umlambo iVltava, kunye nendalo entle ejikeleze ummandla waseBohemia.
Nuremberg ukuya ePrague ngoLoliwe
IMunich ukuya ePrague ngoLoliwe
Berlin ukuya ePrague ngoLoliwe
IVienna ukuya ePrague ngoLoliwe
I-Scenic villages eYurophu
Iyona dolophana intle kakhulu eYurophu ifihlakele kude kubakhenkethi kwiintaba ezinkulu. Ezi zixhobo zixabisekileyo zinokubonakala ngathi azifikeleleki, kodwa ngetekhnoloji yale mihla, basondele kunangaphambili. Ungayenza yonke ilali nge izithuthi zikawonke wonke, kuhambo olufutshane lukaloliwe ukuya eYurophu. Kwiiyure nje ezimbalwa unokubhadula, ukuvuma nokuthatha imifanekiso yale masiko kunye nezimvo ezifihlakeleyo.
Apha Gcina A Isitimela, singakuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi exabiso eliphantsi ukuya nakweyiphi na ilali entle yaseYurophu.
Uya sifuna ukumisa iposti yethu yebhlog ” I-Scenic villages eYurophu”Kwisiza sakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/scenic-villages-europe/?lang=xh ‎– (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / zh-CN ukuya fr / okanye / iilwimi de nangaphezulu.
zintle yokhenketho Iidolophu zaseFairytale kwiiyunivesithi zaseYurophu emizaneni
Uhambo loLoliwe, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe Ukuhamba ngeLuxembourg, Train Travel The Netherlands, Iingcebiso zokuhamba, Travel Europe